Rogue akọrọ detector - MT4 Indicators
Home MT4 Indicators Rogue akọrọ detector
Rogue akọrọ detector
A ngwá ọrụ na-enyere na-data akụkọ ihe mere eme ziri ezi maka irè azụ ule na na.
Ahịa nke niile iche nwere esiwanye dabere mt4 si akpaghị aka trading na omenala ọmụmụ ike ime eme ha ada azum unattended. Ogbugbu nke a ngwaọrụ ịdabere na isi input: price oriri. Ọhụrụ ọ bụla price quote nke ikele / ịjụ ọmụma na-abịa na a ọhụrụ akọrọ. Ọ bụrụ na ndị price oriri nwere agadi ma ọ bụ stale akọrọ, mgbe ahụ, ọ bụ na o kwere omume na price, bụ ndị bụ aba nti. Otú ọ dị, mgbe erekwa na algọridim, na ahia ga-amaghị ihe dị iche ngwa ngwa iji na-eme dị nnọọ site na-achọ na chaatị ruo mgbe eziokwu, ọbụna ma ọ bụrụ na price iche bụ ịrịba iji hụ anya.
Ihe bụ isi ezi uche nke dị Rogue akọrọ detector ngwá ọrụ dị ka ndị a:
Price oriri bụ linear (ugbu a price na-abawanye, mbelata, ma ọ bụ mụ na otu ikwu gara aga price), ma onye ọ bụla price quote (akọrọ) kwesịrị ịbụ zipụta ha n'usoro. Pụtara a price see okwu oge stampụ 12:20:25 mgbe niile kwesịrị na-abata na-agu na n'elu ikpo okwu tupu quote timestamp 12:20:26. Ọ bụrụ na ndị 12:20:25 stampụ abịa mgbe 12:20:26, mgbe njehie ozi na-egosi, ma na popup, email, na / ma ọ bụ dere log format. The log ga-akara aha, na rogue akọrọ, na aga akọrọ ikele / ịjụ na oge-stampụ ọmụma.
Lelee na-abata akọrọ (tick0) timestamp na tụnyere aga na akọrọ timestamp (tinye akà rà na-1). Ọ bụrụ na akọrọ 0 timestamp < akọrọ -1, mgbe ndekọ njikere.
Nhọrọ maka popup, email, na iche iche log faịlụ ndị niile kwere omume. Ọ bụrụ na ị mkpa iji zipu na-egosi na ore ahia ma ọ bụ programmer, i nwere ike iji iche iche log faịlụ ma ọ bụrụ na ị na-achọghị iji ọkachamara na ndekọ. Jide n'aka na ị zaa ajụjụ maka oge dị iche dị ka ndị ọkachamara log ga idekọ obodo kọmputa oge, na timestamp nke akọrọ ga-mt4 ahịa nche oge
echichi: Copy RogueTickDetector.mq4 ma ọ bụ ex4 ka [metatrader4 folder]expertsindicators . Malitegharịa ekwentị metatrader 4 na mgbe ahụ ị ga-ahụ ọhụrụ egosi na ụgbọ mmiri n'okpuru 'omenala egosi’ nchekwa. Dọrọ RogueTickDetector jidesie ọ bụla chaatị na akara na ị chọrọ soro. It is possible to run several dị iche iche indicators simultaneously on the same chart, ma naanị otu onye atụ nke RogueTickDetector kwa esoro akara dị mkpa.
log faịlụ ga- [metatrader4 folder]expertsfiles
Notes: There could be legitimate reasons why rogue ticks are detected on a sporadic basis (di na nwunye nke ugboro n'ụbọchị max). Ma mgbe ụfọdụ, mgbe a ụzọ na-na mberede na-enwe ọtụtụ rogue akọrọ kwa nkeji ma ọ bụ kwa hour (n'agbanyeghị nke akara volatility), it is kwere omume that it is intentional price feed manipulation. Lelee ịhụ ma ọ bụrụ na ụdị ndị ọzọ nke na-ere aka bụ ugbu (egbu / jupụta igbu oge, akpàràkpà slippage, oké re-ruturu, ọhụrụ disconnects, etc). Ọzọkwa elele na ọgwụgwụ gị na latency si mt4 ọnụ ka ihe nkesa dị ka nke ọma dị ka njikọ Ịntanetị quality.
Nọmalị na price na-eri nri rogue akọrọ ndị a n'ihi nke a nsogbu na ore n'akụkụ, dị ka anyị na-ejikarị na-eji ngwá ọrụ na àgwà VPS nkesa ke New York na 100% uptime nkwa. The otu ihe nkesa na-ga-enwe otutu ndụ na ngosi akaụntụ na otutu agbanwe erekwa yiri ego ụzọ abụọ; ma ole na ole agbanwe yiri ka nwere nsogbu anọgide. Ma ọ bụ a ore ahia ga mgbe nwere a nke, ma na mberede na ọ ga-eme ugboro ugboro.
Ebe ọ bụ na ọ na-eji nnọọ ole na ole kọmputa ego, anyị nwere ike ikwu ihe niile ahịa ndị na akpọrọ ezi ịnye ọnụahịa tụlee eji ngwá ọrụ a ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ.
Rogue akọrọ detector bụ a Metatrader 4 (MT4) egosi na ọdịdị zuru oke nke Forex egosi bụ ịgbanwe akwakọba akụkọ ihe mere eme data.
Rogue akọrọ detector enye maka ohere ịchọpụta iche iche peculiarities na ihe nakawa etu esi na price Ọnọdụ nke na-adịghị ahụ anya na gba ọtọ anya.
Olee otú iji wụnye Rogue akọrọ detector.mq4?
Download Rogue akọrọ detector.mq4
Detuo Rogue akọrọ detector.mq4 gị Metatrader Directory / ọkachamara / egosi /
Right click na Rogue akọrọ detector.mq4
Egosi Rogue akọrọ detector.mq4 dị na gị Chart
Olee otú iji wepu Rogue akọrọ detector.mq4 gị Metatrader 4 Chart?
n'isiokwuGuppy (Long na Short)
isiokwu na-esonụRSO, Ikwu Ike Oscillator